Qarsoodiga Martigelinta Websaydhka ayaa La Buuxinayaa (WHSR): Faallooyinka Marti gelinta, Qalabka Basaasnimada iyo Talooyinka
Qari IPs-kaaga Ka ilaali cinwaankaaga IP-da khamaarka.
Isbarbar-dhigga WebkaIsbarbardhig halbeegyada webka 3 markiiba.
Xullo Martiqaadka Saxda ahHel tallada martigelinta websaydhka ee shaqsiyeed.
Muuji kaabayaasha iyo macluumaadka teknolojiyadda websaydhka ee websaydh kasta.
Ma waxaad Martigelineysaa Bixiye Xaq ah?
Bogag kala duwan ayaa leh baahiyo kaladuwan ..
Ka jawaab 7 su'aalood oo fudud oo dooro xalka martigelinta webka ee saxda ah bogaggaaga.
Hel Tallo Bixin Ku-Meel Gaar Ah oo Shaqsiyeed.
Tilmaanta martigelinta ee tallaabada-tallaabo ee tallaabada ah
Sidee web hosting iyo magaca domain ka shaqeeyaa
Halkee laga iibsadaa magacaaga ugu horeeya
Sida loo guuri karo goobtaada hoyga cusub ee cusub
Sida loo iibsado oo loo rakibo shahaadada SSL
Adeegga martigelinta ugu raqiisan hoos ka hooseeya $ 5 / mo
Adeegyada ugu marti-galinta e-mayl ee ugu wanaagsan
Horyaalka ugu fiican ee ganacsiga yar yar / dhexdhexaad ah
Ka Raadi Martigeliyaha ugu Fiican Websaydhkaaga
Ma xukumi karee martigeliyaha webka inuu la socdo?
Waxaan isku diiwaan galinaa oo tijaabi doonaa adeegyo martigelinta shabakada si aad u gooyso ceyrsiga oo aad doorato xalka ugu fiican - Fiiri liistada buuxda ee dib u eegista halkan.
Isticmaal qalabkayaga isbarbardhigga si aan isbarbardhigno liisaska ballaaran ee shirkadaha martigelinaya Waxaad isku barbardhigi kartaa shirkadaha 3 martigelinta isla markaana waxay liiska ku qoran dhammaan faahfaahinta aad u baahan tahay sida qiimeynta, qiimaha, sifooyinka aasaasiga ah, iyo sidoo kale dib u eegid degdeg ah iyo dib u eegista.
Eeg 10ka Xul ee Martigelinta Websaydhka ee ugu Fiican
Qalabka Isku-darka Isku-dhafka
Qalabka Iskudhafka ah ee WHSR Web Host
Isbarbar dhig: BlueHost vs InMotion Hosting
Isbarbar dhig: BlueHost vs SiteGround
Isbarbar dhig: Hostgator vs SiteGround
Dib u eegista Webka
Dib u eegida A2
Dib u eegista BlueHost
Dib u eegista GreenGeeks
Dib u eegista HostPapa
Dib u eegida InMotion
Daraasadda Suuqa: Intee in le'eg Ayay Ku Bixin Karin Web Host?
Qiimaha xayeysiinta ayaa si isdaba joog ah ugu badnaa 10-da ugu dambeeyay 15 sano.
Horaantii 2000, oo ah $ 8.95 / mo oo leh sifooyin asaasi ah ayaa loo tixgeliyaa qiimo jaban. Kadibna qiimaha ayaa hoos u dhacay $ 7.95 / mo, ka dibna $ 6.95 / mo, $ 5.95 / mo, iyo hooseeyaa.
Waxaan baranay isbeddellada suuqyada ee dhowaan waxayna ogaatay, celcelis ahaan ...
Qiimaha qorshaha wadajirka ah ee la wadaago $ 3.40 / mo marka la saxiixayo & $ 4.94 / mo inta lagu jiro cusboonaysiinta,
Qiimaha qorshaha VPS ee kharashka $ 17.20 / mo marka la saxiixayo & $ 20 / mo inta lagu jiro cusboonaysiinta, iyo
Qorshayaasha ugu sareeya ee la wadaago iyo kuwa VPS ee ugu sarreysa waa in aysan kharash ka badan $ 25 / mo iyo $ 170.
Haddii aad ka fekereyso inta ay tahay inaad ku bixiso kharashka web hosting ...
Akhriso Daraasaddeena ku jirta Website-ka Qiimeeynta
Qiimo Gelinta Websaydhada & Qormooyinka
Koodh Kaabboor GreenGeeks
Code Coupon: 10YEARSGREEN Kuwa iska qoraya GreenGeeks markii ugu horeysay, u adeegso koodhkan kuuban si aad ugu keydiso ilaa 70% martigelinta la wadaago (halkaan riix si aad u dalbato). Bixinta: WHSR waxay qaataa khidmadaha gudbinta fr…
Xeerka Koontada Interserver Coupon Code
Koontada Koonon: WHSRPENNY Ma xiisaysaa Interserver marti-gelinta la wadaago? Waxaad hadda ku tijaabin kartaa iyaga oo kaliya $ 0.01 muddo bil ah oo leh koodhka xayeysiinta "WHSRPENNY" (dhagsii halkan si aad u dalbato). Siideynta: WHSR…
Xeerarka Coupon Coupon-ka 'GlowHost'
Code Coupon: WHSR30 Kuwa iyagu wax iibsanaya markii ugu horreysay ee GlowHost, adeegso koodhkan sicir-dhimista si aad 30% uga hesho qorshayaasha martigelinta GlowHost (guji halkan si aad u dalbato). Soo bandhigid: WHSR hesho…
In badan oo ku jira bogga internetka
Sidee ugu nugul yahay Adeeg bixiyahaaga Webka?
Isku dayga jabsiga boggaga internetka ayaa aad uga badan intaad moodeyso. In kasta oo qaar badan oo inaga naga mid ah aynaan arkin, haddana weerarrada aamusnaanta ah ayaa had iyo jeer ka socda meel kasta oo shabag ah. Qayb fiican oo ka mid ah weerarada ayaa lala beegsadaa…
10 Beddelka cajiibka ah ee Cloudways
Cloudways waa adeeg Bixiyaha sida-a-Adeegga (PaaS). Waxay u shaqeysaa sidii marin u dhaxeysa adeegsadayaasha iyo bixiyeyaasha kaladuwan ee Cloud sida Digital Ocean, Linode, iyo Vultr. Ugudbinta akoonada si buuxda loo maareeyay, waa go'aan…
Run True Cloud Hosting waa Digital Che Che Digital? Muuqdo Dhimasho Qiimeynta Cloud
Cloud Computing-ka ayaa runtii kaliya si aad ah looga ganacsadeeyay tobankii sano ee la soo dhaafay ama wax ka badan. Farsamo ahaan si kastaba ha noqotee, fikradda ayaa sii jirtay muddo dheer. Ereyga 'Cloud' badanaa waa ref…
SiteGround waxay sumcad ku dhex leedahay martigelinta webka laakiin sicirbararka muddooyinkaan dambe ayaa dhalisay in qaar ka mid ah ay raadiyaan waxyaabo kale oo ka jaban. Iyada oo qorshayaashu hadda ka bilaabanayaan meel u dhow labalaab qiimaha, dadka isticmaala ayaa laga yaabaa inay…
Xagee lagu martigaliyaa mashruucaaga xiga? Howlaha ugu wanaagsan ee martigelinta Django
Django waa waxoogaa calaamad ah maxaa yeelay sida uu yahayba, jacaylka qaabkan ayaa u muuqda inuu kala jeexan yahay laba xafiiltan xiise leh - Mareykanka iyo Ruushka. Wali, waxa jira waxyaabo badan oo la jecel yahay oo loogu talagalay dev…
7 Beddelka GoDaddy ee Domain & Martigelinta
GoDaddy waxaa laga yaabaa inuu yahay 'aabe weyn' ee adeegyada marti-gelinta laakiin tan ugu weyn maahan sida ugu fiican. Waxaa loo aasaasay 1997 sidii Jomax Teknolojiyada, this Arizona-behemoth xaruntiisu tahay maanta waxay u adeegtaa in ka badan 18 milli…
Bixiyeyaasha Marti-gelinta Cloud ee ugu fiican sannadka 2020
Bixiyeyaasha ugu wanaagsan ee martigaliyayaasha "Cloud" maanta waxay siinayaan dadka isticmaala wax kabadan aruurinta aruurinta. Inta badan waxay ku kaladuwanaadaan suuq hore u buuxaan. Iyadoo adeegyada shabakadda ay noqdeen…
Bixiyeyaasha Ugu Fiican ee Bixiyeyaasha VPS ee ay tixgelinayaan (2020)
Qorshayaasha Marti-gelinta VPS waa qodobbada awoodda ee inta badan bixiyayaasha adeegga marti-gelinta websaydhka ee xallinta xallinta ballaadhan. Iyagu waa meesha ugu macaan ee kala guurka loogu talagalay isticmaaleyaasha badankood runtiina waa halka ay inta badan ku dhammaadaan markey qalin jebiyaan…
Plesk vs cPanel: Isbarbar dhig Bogga Kontoroolka Websaydhka ugu caansan ee Dunida
Guddiyada xakamaynta ayaa ah qayb muhiim ka ah khibradda martigelinta websaydhkeenna laakiin inbadan oo naga mid ahi kama siin fikir badan. Tusaale ahaan, miyaad ogeyd in labada pan ee ugu caansan Maareeyayaasha Xakameynta Websaydhada…
Dhisidda Guusha Blog
Sidee loo abuuraa blog-kaaga ugu horreeya adigoo adeegsanaya WordPress? Sidee looga sameeyaa lacag badan blogging? Sidee si firfircoon loogu kobcin karaa taraafikadaaga blogga? Waa maxay aaladda saxda ah ee wax lagu qoro ee la adeegsado?
Baro waxkasta - laga bilaabo aasaaska ilaa tatics-ka suuqgeynta teknoolojiyadda horumarsan ee ku saabsan probloggers-yada kuwaas oo "halkaas joogey oo sidaas sameeyay".
Sida loo Bilaabo Blog 2020
Tusmooyinka Qorista WHSR
Sida loo helo 8,000 Blog Comments: Daraasad Xaalad
Waxaa qoray Ryan Biddulph
Dhawaan waxaan ka helay faalladayda 8,000th ee ku saabsan Blogging Blog. Kadib markaan ku dhufanno talaabadan waxaan rabaa in aan wadaagno kiis-cilmi-baaris faahfaahsan sida loo helo faallooyinka 8,000 ee ku jira bartaada. Waa maxay sababta aad u rabto in aad isdifaacdo ...
Magaca Blogka Fikradaha: Talooyinka Si aad u Qorto Magaca Fiican ee loogu talagalay Bloggaaga
Maxay tahay dhibaatada ugu wayn ee blogger kasta oo waji leh? Isku day inaad magacowdid boggooda. Magacaabista blogka wuxuu noqon karaa mid aad u adag, gaar ahaan haddii aad ku cusub tahay blogging oo dhan iyo sheyda. ...
Hababka Ganacsiga ee ugu Fiican ee loogu talagalay Wareegyada aan faa'iido doonka ahayn
Barta blogku wuxuu ka badan yahay kaliya habka loo soo diro stats iyo jaraa'idyada saxaafadeed ee ku saabsan shirkaddaada. Dhab ahaan, si habboon loo isticmaalo, blogging for nonprofit wuxuu noqon karaa qalab lagama maarmaan ah si loo sii xoojiyo astaantaada ...
Ku ordaya Dalxiis Online ah
Meherad kastaa waxay u baahan tahay wax sax ah oo khadka tooska ah - Waxaad u baahan tahay meel bannaan oo internetka ah oo aad ku dhisto ganacsigaaga, ku iibiso alaabada ama magacaaga halkaas uga baxdo.
Uma baahnid inaad ahaato tiknoolaji ama barnaamij.
Raac habka saxda ah. Xulo mashaariicda saxda ah. Isticmaal qalabyada saxda ah ee saxda ah. Waxaad noqon doontaa 100% ganaax.
Saddex Siyaabood oo Loo Abuuro Degel / 50 Fikradaha Ganacsiga ee tooska ah
Tusaha Ganacsiga & Horumarinta ee ugu dambeeyay
OutGrow: Kordhi Qiimaha Beddelka illaa 40%
Outgrow waxaa aasaasay Pratham Mittal iyo Randy Rayess. Asal ahaan waa qalab suuq geyn ah oo ku takhasusay naqshadaynta noocyo ka kooban habeyn iyo is-dhexgal ku saabsan joogitaankaaga internetka. Maanta, O…
Faa'iidooyinka: Muxuu Ka Wanaagsan Yahay SaferVPN? 1. SaferVPN Qaab Dhaqameedka Nabadeed ee soo jireenka ah, in kasta oo ay ku yar tahay qiimeeya muddada-dheer, waxay bixisaa inta badan waxa bixiyayaasha kale ee adeegga VPN qabtaan. Tan waxaa ku jira barnaamijka guud ee guud…
Samee oo Uxir bog websayd ka badan $ 100,000 (Tusaalooyinka Nolosha dhabta ah)
Dhisidda ka dibna dib-u-iibinta (dib-u-iibinta) domain / degel waxay noqon kartaa ganacsi aad u lacag badan. Ma ogeyd in websaydhyada qaarkood loo soo iibiyey tirooyinka xiddigta sare? Websaydhyada ayaa…
Dib u eegista WannaFlix
Faa'iidooyinka WannaFlix: Waxa Aan Ka Jecelayaa WannaFlix 1. Qiimaha Hoose ee Galitaanka Shirkadaha badankood ee ku jira booska VPN waxay u muuqdaan inay bilaabaan qiimaha qiimaha iska-bixinta bil kaliya. Si kastaba ha noqotee, inta badan waxay ku ilaalinayaan agagaarka t…
Dib u eegista IPVanish
Faa'iidooyinka: Muxuu Ka Wanaagsan Yahay IPVanish? 1. IPVanish Ma Hayso Diiwaan Gelinta Diiwaangalinta ayaa laga yaabaa inay tahay barta ugu muhimsan ee inta badan bixiyayaasha adeegga VPN ay la socdaan baaritaan. Ujeedooyinka ugu weyn ee adeegga sida t…
Chaturbate waa goob caan ah oo caan ah, laakiin weligaa qof idinka mid ahi weligiis ma la yaabay waxa tikniyoolajiyaddu u wado? Ka dib oo dhan, waxay awood u leedahay inay maamusho kumanaan ka mid ah duruufaha tooska ah ee xawaaraha dhagaystayaasha aad u fara badan markii la siiyo…
Ilaalinta Asturnaantaada Qadka
Da'da Macluumaadka ee maanta, xogtu waa lacagta cusub. Xogtaada shakhsi ahaaneed waxay noqotay mid ka mid ah hantida kaliya ee ugu qiimaha badan maanta laga heli karo internetka iyo sida waxkasta, waa la xadi karaa ama laga ganacsan karaa ama la isdhaafsan karaa.
Shirkaduhu waxay isku dayayaan inay xog uruurin dheeraad ah ka helaan isticmaaleyaasheeda ilaa xad ay noqotay mid xad dhaaf ah halka wadamada ay ku kala qaybsan yihiin sida loo maareeyo xaalada.
Marka, maxaynu shaqsi ahaan karnaa sameyn karnaa si aan u ilaalino qarsoodiyadeena khadka tooska ah? Jawaabta waxay noo horseedaysaa VPNs.
Sidee VPN u shaqeysaa / 10ka adeeg ee ugu sareeya ee VPN inay tixgeliyaan
Tilmaamo Gaar ah oo Khadka Internetka ah oo Dheeraad ah
Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaatid Cloudflare (iyo qaar aadan aqoon)
Cloudflare waxaa sida ugu badan loogu yaqaanaa shabakad gudbinta agab (CDN). Maanta way dhaaftay taas oo waxay bixisaa adeegyo fara badan oo badanaa daboolaya iskuxirka iyo amniga. Himiladooda waxay cadeeyeen: In laga caawiyo bu…
NordLynx wuxuu kordhiyaa xawaaraha NordVPN si taxaddar leh
NordLynx waa borotokool ay NordVPN ka sameysay meel ku habboon WireGuard. Tan dambe waxaa tijaabiyey tijaabooyin badan oo bilow ah si ay u noqdaan jiilka xiga ee hab maamuuska isgaarsiinta. Si kastaba ha noqotee, illaa WireGuard i…
Iska jir: Maaha VPN oo ka shaqeeya Shiinaha oo dhan waa isku mid
Waxay ahayd wax ka badan afar sano tan iyo markii Shiinaha uu furay meheraddiisa. Waqtigaas oo dhan, ummaddu waxay ku fidday baalasheeda wax kasta laga soo bilaabo sahaminta saliida illaa teknolojiyadda. Isla mar ahaantaana,…
ExpressVPN vs NordVPN: Waa kuwee VPN waa iib ka fiican?
Adduunyada Shabakadaha gaarka loo leeyahay ee Virtual, waxaa jira magacyo badan oo caan ah. Majiro qof caan ah oo laga yaabo, in ka badan NordVPN iyo ExpressVPN. Labadan beemmothth waxay ku maareyn jireen garoonka muddo sannado ah. Kuwa…
Ma yihiin sharciyo VPNs? 10 Waddan oo Mamnuuca Isticmaalka VPN
Qaarbaa la yaab ku noqon kara, laakiin Virtual Private Networks (VPN) ayaa runtii laga mamnuucay waddamada qaarkood. In kasta oo liiska waddamada mamnuucaya isticmaalka VPNs ay gaaban yihiin, waxaa jira…
Hab qarsoodi ah ayaa la sharraxay: Miyuu kuu dhigayaa qarsoodi?
Xaaladda qarsoon waa goob ka hortagaysa taariikhda biraawsarkaaga in la keydiyo. In kasta oo adeegsadayaal badani ay kuxiran yihiin xaalad qarsoodi ah oo keliya muuqaalka biraawsarka gaarka loo leeyahay ee Google Chrome, ayaa ah kuwa…
Dadku waxay ka danbeeyaan WHSR
WHSR waxay daabacdaa qoraallo iyo horumarinta qalabka loogu talagalay dadka isticmaala kuwaas oo ka caawinaya marti gelinta iyo dhisida website.
Suuqgeynta martigelinta waxay ku badan tahay kumanaan bixiyeyaasha, mid kasta oo leh xulashooyin kala duwan. Hadafkeenu waa inaan ka nadiifinno shaandhada qiiqa, waxaanad ka heleysaa asalka tayada iyo qiimaha shirkadahan soo bandhigaan.
Wax badan ka baro WHSR
Marti gelinta Webka aan Xaddidneyn: Xaqiiqda?
Faallooyinka VPN: ExpressVPN / NordVPN / Surfshark / CyberGhost / IPVanish / TorGuard
Block Writer's Block? 8 Waxyaabaha Aad Ka Waadi Karin Goobtaada Halka Ecommerce
Bait Your Hook: Caqabadaha ugu fiican ee loogu talagalay Generator Leads